Ity fotokevitra ity dia mampiseho iPhone 13 tsy dia be mpanaraka sy fakan-tsarimihetsika tsara kokoa | Vaovao IPhone
Ity fotokevitra ity dia mampiseho iPhone 13 miaraka amina toerana ambany sy fakan-tsarimihetsika tsara kokoa
ny tsaho sy famoahana momba ny iPhone 13 dia manomboka manao ny pejy voalohany amin'ny haino aman-jery. Toy ny isan-taona, rehefa manakaiky ny volana septambra isika dia manomboka navoaka ny angona, tsaho ary ny hevitra mety hitranga amin'ny mety ho an'ny iPhone manaraka. Amin'ity tranga ity a hevi-baovao momba ny iPhone 13 izay mampiditra lafin-javatra roa efa noresahina efa elaela. Toa izany ny fihenan'ny notch ambony sy ny fanatsarana ny fakan-tsary dia vinavinaina ihany koa amin'ny ambaratonga teknika sy famolavolana.
Manomboka ny hevitra IPhone 13: miisa hatramin'ny septambra
Mampamangy any amin'ny notch kely indrindra, ny fakantsary vaovao ahafahanao maka sary tsara kokoa. Bateria MagSafe handeha, miaraka amin'ny 1460 mAh. Ambonin'izany, ny bateria lehibe kokoa dia maharitra hatramin'ny 1,5 heny kokoa.
Ity hevitra vaovao navoakan'ny mpampiasa fanta-daza ConceptsiPhone ity dia mampiseho iPhone 13 manana loko volomboasary elektrika vaovao. Raha ny marina, mandritra ny horonantsary dia afaka mahita zava-baovao iray isika: bateria MagSafe miloko. Naminany ny mpampiasa fa afaka nanolotra an'ireny bateria ireny i Apple, natomboka herinandro lasa izay, miaraka amin'ny endriny fotsy ny lokon'ny iPhone 13 ary ny sisa kosa fotsy fa tsy ny vatana fotsy iray manontolo satria efa amidy ankehitriny.
Miverina ny tsaho, ny iPhone 13 no hanomboka ny seho an-tsary mandrakariva
Amin'ny ambaratonga hatsarana, ny foto-kevitra iPhone 13 dia mitovy amin'ny iPhone 12. Afa-tsy iray mampiavaka azy: ny fakantsary. Tokony hotadidintsika fa miatrika ilay maodely isika izay tsy mampiakatra afa-tsy ny zoro malalaka sy ny zoro ultra malalaka ary, amin'izao fotoana izao, ireo fakan-tsary ireo dia eo amin'ny toerana mitsangana any aoriana. Na izany aza, amin'ity fifandraisana ity dia hitantsika ny fomba ny fakantsary roa dia hiatrika diagonaly, avelao ny flash ao amin'ny quadrant havanana ambony sy ny mikrô any ankavia havia.
Ary farany, ilay zava-baovao mahafinaritra tianay dia fihenam-bidy ny takelaka efijery amin'ny sisiny ambony. Aza adino fa ity notch na notch ity dia ny Face ID complex izay mampahafantatra ny fakantsary sy ny sensor rehetra izay tompon'andraikitra amin'ny fanolorana ny angona hanokatra ny fitaovana. Apple dia mety afaka nihena sy nametaka ireo sensor ireo tamin'ny toerana kely kokoa, mamela hanana fanamafisana kely ny efijery, manome antoka fa hanana toerana bebe kokoa ao amin'ny bara fananganana iOS.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » Ity fotokevitra ity dia mampiseho iPhone 13 miaraka amina toerana ambany sy fakan-tsarimihetsika tsara kokoa
Instagram ho an'ny ankizy latsaky ny 13 taona dia ho tanteraka tsy ho ela
Raha manana Apple Watch Series 2 ianao dia miala amin'ny watchOS 8